Momba anay - Hebei TUBO Machinery Co., Ltd.
Tompon'ny TUBO ny haitao farany Roller Common Use Technology, FF Forming, FFX Forming, mivantana miakatra amin'ny Square, sns. Rehefa avy nikajiana ny habe sy ny vokatr'ireo fangatahan'ny mpividy, dia afaka manamboatra milina fantsom-by / fantsom-bokatra izay mamonjy ny totalin'ny fampiasam-bola hatramin'ny farany.
TUBO Masinina nandresy maro ny tsipika famokarana an-trano sy any ivelany ny milina fantson-drano, milina mamorona mangatsiaka ary manamboatra tsipika misy laza tsara sy kalitao. Natondrana any ivelany ny masininay Chile, Kolombia, Mexico, Ekoatera, Rosia, Albania, Torkia, Irak, Iran, Sipra, Syria, Oganda, Angola, Etiopia, Vietnam, Kambodza, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan sns.
TUBO Masinina dia tsy vitan'ny fanamboarana milina avo lenta, fa manolotra serivisy ara-teknika sy aorian'ny fivarotana matihanina. Mandritra izany fotoana izany, ny elanelam-bokatra dia afaka mifanaraka amin'ny takiana sy fangatahan'ny mpampiasa.
TUBO Machines, amin'ny maha-mpiara-miasa ny mpampiasa anao, dia manome na aiza na aiza & na oviana na oviana ny teknika avo lenta sy ny fanohanana ara-teknika, ny fampahalalana, ny hevitra ary ny serivisy mety indrindra. Ny fahombiazan'ny mpampiasa dia mitondra ny fahombiazan'ny Masinina TUBO.
Masinina TUBO - Mamorona sanda ho an'ny mpampiasa!
Amerika atsimo Eoropa Andrefana Azia Atsinanana Afovoany Atsinanana Africa Oceania
Orinasa mpivarotra mpamokatra
Isan'ny mpiasa: > 236
Varotra isan-taona: > 25 MILIONA
Taona napetraka: 1997
1. Serivisy mialoha ny varotra
Ireo injenieran'ny TUBO MACHINERY dia manadihady tsara ny baikon'ny mpampiasa, hahazoana antoka fa azo tanterahina mifanaraka amin'izany ny fitakiana rehetra.
2. Fametrahana sy fanirahana
Fametrahana sy fanendrena milina fantsom-bokatra feno, fametahana tsipika, milina fananganana horonan-taratasy;
Fanaraha-maso ny fametrahana sy ny komisiona;
Fiofanana ho an'ireo teknisiana / mpiasa mpampiasa mandritra ny asa fanirahana;
Fiasana maharitra amin'ny fikosoham-bary, raha angatahina;
3. Fanohanana aorian'ny fivarotana
TUBO MACHINERY dia afaka manome andiana serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra ho an'ny mpanjifa. Aorian'ny fametrahana sy fananganana komisiona dia hisy fiofanana ara-teknika feno omena an'ireo mpandraharaha sy mpiasan'ny fikojakojana. Ny teknisiana serivisy aorian'ny varotra dia hitazona firaketana an-tsipiriany momba ny mombamomba ny mpanjifa sy ny satan'ny fitaovana ho an'ny mpanjifa, ary hanao fanavaozana tsindraindray sy fanarahana ny loop-loop. Raha misy ny fanontaniana, ny injenierantsika misahana ny fikojakojana dia hamaly ny fakan-kevitra an-telefaoninao mandritra ny ora, hanome vahaolana ara-teknika am-paharetana sy am-pitandremana ary hanome torolàlana ho an'ny mpandraharaha na mpiasa mpikojakoja.
4. Fanohanana fanapahana
Injeniera mahay sy za-draharaha ao amin'ny TUBO MACHINERY dia vonona hiatrika ny karazana fahasembanana.
Fanampiana ara-teknika eo noho eo sy toro-hevitra amin'ny alàlan'ny telefaona sy / na e-mail;
Serivisy teknika tanterahina ao amin'ny tranokalan'ny mpanjifa, raha ilaina;
Fanomezana maika ny singa mekanika sy elektronika;
5. Fanatsarana sy fanavaozana
TUBO MACHINERY dia manana traikefa lehibe amin'ny fanavaozana, fanavaozana na fanavaozana ireo milina fantsona efa antitra. Ny rafitra fanaraha-maso dia mety ho lasa daty sy tsy azo atokisana aorian'ny taona maro tany an-tsaha. Afaka manolotra ny safidy farany mifehy mifototra amin'ny PC, PLC ary CNC mifototra izahay. Ny rafitra mekanika sy mifandraika amin'izany dia afaka mandray soa ihany koa amin'ny fanavaozana na fanoloana, manome ny mpampiasa vokatra tsara kalitao ary fandidiana azo antoka kokoa amin'ny masinin'izy ireo.
Izahay, Hebei TUBO Machinery Co., Ltd., manamboatra sy manondrana fantsom-bokatra / fantsom-bozaka vita amin'ny fantsom-bozaka, milina mangatsiaka mamorona milina sy tsipika fanodinana, ary koa fitaovana enti-manampy mandritra ny 16 taona mahery, dia namolavola sy nitombo nifanaraka tamin'ny takian'ny tsena tsy mitsaha-mitombo. .
Miaraka amin'ny maherin'ny 130 ny karazana fitaovan'ny milina CNC, ny mpiasa maherin'ny 200, eo ho eo. 45.000 metatra toradroa ny velaran'ny gorodona, ny milina TUBO dia tsy nitsaha-nitombo ary nanamafy ny fahalalany teo amin'ny sehatra ara-potoana. Ny fanovana sy ny fanarahana ny fangatahan'ny mpanjifany dia heverin'ny orinasa ho mpiara-miombon'antoka manana tombony sy mendrika.
Nahazo mari-pankasitrahana marobe ny vokatray.
Hijery misimisy kokoa momba anay